Valleymount, County Wicklow, i-Ireland
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Libby
U-Libby Ungumbungazi ovelele
Indlu yomqeqeshi isanda kubuyiselwa ngothando futhi igcwele ubuhle nokukhanya. Inomuzwa wokuzola, ozolile nakho konke ukunethezeka isivakashi esingakufisela. Yindawo ekahle kakhulu yokuvakasha kwase-Ireland okugcinwe ogwini lwechibi lase-Longington futhi ezungezwe yizintaba ezinkulu ze-Wicklow.
Phakathi nemizuzu engu-10 kunemizana yase-Ballymore Eustace ne-Hollywood kokubili enama-Gastro-pubs amahle kakhulu kanye ne-Longington kuzo zonke izitolo. I-Russborough House iseduze futhi ifanele ukuvakashelwa.
Indlu yomqeqeshi inokufinyelela okuqondile echibini lase-Longington ukuze uhambo lwakho luqale emnyango wakho.
4.98 · 167 okushiwo abanye
I-Wicklow yaziwa njengengadi yase-Ireland futhi indlu yenqodlana ibekwe kwenye yezindawo ezinhle kakhulu. Kuyinjabulo ukuvuka kule ndawo enhle enomoya ohlanzekile nokuthula. Ngezinye izikhathi kunzima ukukholelwa ukuthi idolobha lase-Dublin liqhele ngemizuzu engu-50 kuphela.
Phakathi nemizuzu engu-10 kunemizana yase-Ballymore Eustace ne-Hollywood kokubili enama-Gastro-pubs amahle kakhulu. I-Russborough House iseduze futhi ifanele ukuvakashelwa. I-Longington nayo ikude ngemizuzu engu-10 futhi inamamakethe amakhulu amaningana, amaqebengwana, amabhikawozi, amathilomu namaphabhu. Uhambo lwe-Greenway lusuka e-Avon Rí, e-Longington luya e-Russborough House. I-AVON Rí iyindawo enhle kakhulu yokuqasha amabhayisikili noma ama-Kayaks futhi inemidlalo eminingi yamanzi neminye imidlalo yangaphandle. Izindawo zokukhempa zidlula kuwo wonke amaholide. Isikhungo sokuqwala izintaba sase-Hollywood sabathandi bamahhashi kanye ne-Tulfaris House yabathandi begalofu. Kukhona ngempela okuthile lapha kuwo wonke umuntu.
Indlu yabanikazi ivela ngaphesheya kwegceke futhi umnyango uhlezi uvulekele usizo ngezinto ongazenza noma izindawo ongaya kuzo noma ingxoxo nje. U-Libby ungumbungazi ohlakaniphe kakhulu futhi ubumfihlo bakho buhlonishwa njalo.
ULibby Ungumbungazi ovelele